Ama-TV anamasentimitha angaphezu kwama-50, yikuphi okufanele akhethe? | Izindaba zamagajethi
Ama-TV anamasentimitha angaphezu kwama-50, yikuphi okufanele akhethe?
Ngabe ucabanga ukuvuselela ithelevishini yakho yasekhaya futhi unikeze idivayisi yakho endala ipasipoti? Ngabe usubuke izincwajana eziningi nezitolo eziku-inthanethi futhi awazi ukuthi iyiphi imodeli ongayikhetha? Ngabe unekamelo lokuhlala elikhulu kangaka ukuthi abantu baseBrady bangahlala kulo? Ngemuva kwalokho okufunayo ithelevishini okungenani engama-intshi angama-50, kwalabo lapho isithombe sibonakala ngathi sizokuthola futhi lapho uzothokozela khona ama-movie wakho nochungechunge njengangaphambili.
Ngenhlanhla, namuhla, ukunikezwa kwethelevishini okungamayintshi angama-50 usayizi wesikrini, nokuningi, kuhluka ngempela, ukuze uhlole inani elihle lemikhiqizo, amamodeli, amanani entengo yokufunda, izici nokuningi. Ingxenye engemihle yalokhu kunikezwa ukuthi singasangana ngokuzama futhi sigcine singazikhumbuli izici zohlobo oluthile noma olunye. Ngakho-ke, namuhla ku Izindaba zamagajethi sifuna ukukunika isandla futhi senze usesho lwakho lube lula ngokusiphakamisa Ukuqhathanisa kwe-TV Amasentimitha angama-50 noma ngaphezulu ongagcina. Ungakwazi yini ukuhamba nathi?
2 IPanasonic VIERA TX-50DX780E
3 Ingxenye #: Panasonic TX-50EX780E
4 I-LG 55EC930V
5 I-Sony KD-49X8308C
6 IPhilips 50PUH6400
Ake siqale ukukhetha kwethu ngalokhu SAMSUNG UE50KU6000, i-TV emangalisayo nge Isikrini esingu-50 intshi esingu-4K UHD, okubandakanya izikhulumi ezihlanganisiwe, amachweba amabili e-USB 2.0 ukuze ukwazi ukuxhuma i-pendrive noma i-hard drive yangaphandle egcwele ama-movie nochungechunge, ngokuxhumeka Ethernet, ukulibaziseka kwesikhathi kokurekhoda umsebenzi, Amachweba we-3 HDMI ukuxhuma amanye amadivayisi njengesidlali se-BluRay, i-Apple TV noma i-Chromecast phakathi kwabanye, smart TV ngohlelo olusebenzayo lweTizen, Isilinganiso samandla, esihambisana nesistimu yokukhweza ye-VESA ukuze ukwazi ukuyilengisa kalula odongeni nokunye okuningi.
Izinzuzo zayo eziyinhloko zifaka phakathi i- ikhwalithi yesithombe enhle ngaphandle kokubonisa futhi nge-angle yokubuka efanelekile, ngakho-ke ngeke kudingeke ushise ikhanda lakho ngokwenza ukulungiswa; futhi ine ikhwalithi enhle yomsindo, izixhumi eziningi njengoba sibonile, futhi kunjalo Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa i- I-Smart TV ehlanganisiwe ngenxa lapho ungadlala khona imidlalo engasindi ngokweqile, ungene kwi-inthanethi futhi ujabulele izinhlelo zokusebenza eziningi njenge-YouTube, iNetflix, njll.
IPanasonic VIERA TX-50DX780E
Senza ukweqa siye komunye wemikhiqizo yezobuchwepheshe enomlando kakhulu futhi eyaziwayo ngale thelevishini IPanasonic VIERA TX-50DX780E con Isikrini se-intshi se-50 ku-diagonal I-Ultra HD (Amaphikseli angama-3840 x 2160) futhi nge-3D ne-Smart TV kuhlanganiswe.
Le thelevishini yePanasonic VIERA TX-50DX780E inedizayini enhle phakathi kwezimpawu zayo eziphambili esingagqamisa ukuba khona kwazo izikhulumi ezimbili ezihlanganisiwe, ukuxhumana Bluetooth, okukhipha umsindo wedijithali, amachweba amabili e-USB 2.0 kanye nechweba elilodwa le-USB 3.0, isitifiketi samandla A, ukuxhumana Ethernet, Ukuhambisana kwesistimu ye-VESA, izindlela ezahlukahlukene zomsindo, izindlela ezahlukahlukene zesithombe ezihlakaniphile, izimbobo ezintathu ze-HDMI, smart TV ngohlelo lokusebenza lweFirefox OS, WiFi, njll.
Njengoba ukwazi ukubona, ithelevishini ephelele engamasentimitha angama-50 phakathi kukabani izinzuzo eziphambili singakhomba ikhwalithi yomsindo enhle, ukusetshenziswa kalula, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, izinketho zokuxhuma eziningi nezinhlobonhlobo kanye ne-angle yokubuka ebanzi.
Ingxenye #: Panasonic TX-50EX780E
Sihlala nomkhiqizo ofanayo, iPanasonic, kepha imodeli ehlukile (qaphela ngoba igama lesibizo liyahluka kusuka kwangaphambilini ngohlamvu olulodwa nje). Imayelana nalokhu Ingxenye #: Panasonic TX-50EX780E, ithelevishini ene Isikrini se-UHD esingu-50 intshi (Amaphikseli angama-3840 x 2160) I-4K HDR 3D ongajabulela ngayo umuzwa we-cinema oyiqiniso, kepha ngaphandle kokushiya igumbi lokuphumula.
Le TV enhle inezici ezisezingeni eliphezulu ezifana ne- amachweba amabili e-USB 2.0 kanye nechweba elilodwa le-USB 3.0, okukhipha umsindo kwidijithali, i-headphone jack, amachweba amane e-HDMI, inketho yokurekhoda kwi-hard disk noma i-pendrive, ukuxhumana Bluetooth ukuze ukwazi ukuxhuma ikhibhodi negundane, isitifiketi samandla A, ukuhambisana nohlelo lokufaka i-VESA, izipikha ezimbili ezihlanganisiwe ezine-10W yamandla ngayinye, I-Smart TV "My Home Screen 2.0" enokufinyelela kuNetflix nezinye izinhlelo zokusebenza, nokuningi. Ngaphandle kokukhohlwa i- ukuthambekisa nokuphakamisa umklamo okwazi ukuzivumelanisa nazo zonke izindawo nezindawo,
Phakathi kwezinzuzo zayo eziyinhloko, njengemodeli yangaphambilini, singagqamisa ukuthi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, isebenzisa amandla amancane kakhulu, inikeza ikhwalithi yesithombe enhle ngaphandle kokucabanga nge-angle yokubuka ebanzi, futhi izinketho zokuxhuma zibanzi impela. Ngaphandle kokukhohlwa i- ukuthambekisa nokuphakamisa umklamo okwazi ukuzivumelanisa nazo zonke izindawo nezindawo.
Sizothatha usayizi omncane njengoba sishintsha ama-brand ukukhuluma ngale TV I-LG 55EC930V ukunikela ngesipiliyoni somsindo nevidiyo esingajwayelekile.
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esingenhla, siphambi kwethelevishini ye- isikrini esilugobile ngosayizi wesibuko se- 55 intshi i-HD ephelele (1920 x 1080), iphakame kancane kunamamodeli esiwabonile kuze kube manje, iphaneli yezobuchwepheshe OLED sibonga lapho uzokwazi khona ukujabulela izithunzi ezichazwe kabanzi, abamnyama abahlanzekile nemibala egqamile futhi ejulile, kanye Ubuchwepheshe be-3d.
Futhi asikwazi ukukhohlwa ukwakheka kwayo okuhle, okuncane kakhulu, kanye nokufakwa kwe- Umsebenzi we-Smart TV ngohlelo lokusebenza lwe-webOS oluzokuvumela ukuthi ungene kwi-inthanethi futhi ube nezinhlelo eziningi zokusebenza ngqo ku-TV yakho njenge-Netflix, i-Wuaki TV, i-YouTube nokunye okuningi.
Ezinye izici eziphawulekayo ubukhona be- amachweba amane e-HDMI, izixhumi ezintathu ze-USB 2.0, Okokufaka kwe-AV, umsebenzi wokurekhoda kwi-pendrive noma i-hard disk yangaphandle, kungenzeka ukuxhuma ikhibhodi negundane, ukuxhumeka kwe-Wi-Fi, izipikha ezimbili ezihlanganisiwe zamandla we-10W ngayinye, njalonjalo.
Ngakho-ke, inzuzo yayo enkulu yi- ikhwalithi yesithombe enkulu ubuchwepheshe be-OLED bungezwe ku-a isipiliyoni esikhulu sokuntywila equkethe ukwakheka kwesikrini okugobile kanye izinketho zokuxhuma eziningi nezinhlobonhlobo.
Futhi sisuka eSouth Korea siya ezweni eliphumayo nelinye lemikhiqizo ethandwa kakhulu ngaso sonke isikhathi, kokubili ngesithombe nangomsindo, ngocingo nakanjani, imidlalo yevidiyo. Ngisho u-Sony nale TV I-Sony KD-49X8308C esingajabulela ngayo okuqukethwe kwethu okuyintandokazi njengoba sasingakaze sikucabange ngenxa yayo Isikrini se-LCD esingu-50-inch Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) ehlanganisa ubuchwepheshe be-IPS obuhlinzeka ngekhwalithi ephawulekayo yombono nge imibala yemvelo nobukhali obukhulu, noma ngabe izithombe zingenankinga futhi / noma ezihambayo, sibonga okuhlanganisiwe kubuchwepheshe be-Motionflow.
Asikwazi ukushiya okuhle design nenhle, enekhwalithi enhle kakhulu eqeda njengoba kujwayelekile kwaSony. Ngaphezu kwalokho, ukuba iyahambisana ne-VESA mounting system, singabeka ithelevishini yethu odongeni futhi ngaleyo ndlela sijabulele okwengeziwe kwesinema.
Ngokuya ngomsindo, inesipika esinamandla seBass Reflex esinikeza ifayela le- ikhwalithi enhle yomsindo. Futhi uma ufuna ukuxhuma amanye amadivayisi, ngeke ube nenkinga ngoba iSony KD-49X8308C inayo izimbobo ezintathu ze-USB y amachweba amane e-HDMI.
Sesibonile izinketho ezinhlanu ezinhle kepha kusenokunye esingakubona. Kulokhu siyema ukuhlaziya le thelevishini i-Philips 50PUH6400, idivaysi ene-Smart TV edidiyelwe futhi enedizayini eqaphelayo, enhle nenhle, enonyawo oluhambisana kahle nomklamo owehlisiwe wozimele bawo baseceleni, futhi obuye uhambisane uhlelo lokufaka lwe-VESA, ukuze sikwazi ukujabulela ngokugcwele uchungechunge lwethu oluthandayo noma lowo mdlalo olindelwe isikhathi eside.
IPhilips 50PUH6400 Smart TV ifaka i- Isibonisi se-50 ″ 4K Ultra HD LED ihlinzeka ngekhwalithi yesithombe engajwayelekile eyithuthukiswa ngokufakwa kobuchwepheshe I-Micro Dimming Pro, sibonga lapho singakwazi ukulungisa ukungafani kwesikrini ngokususelwa kunani lokukhanya okutholakala egumbini lethu lokuphumula noma ekamelweni lokulala, futhi Ukunyakaza kwemvelo, okwandisa ubukhali nokushelelayo ukuze sikwazi ukubona izithombe ezihambayo ngaphandle kokuhlanekezela. Futhi uma konke lokhu kubonakala kukuncane kuwe, ubuchwepheshe I-Pixel Plus Ultra HD inikeza imibala ecace kakhulu futhi enamandla kakhulu.
Ngaphezu kwale khwalithi yesithombe enhle, izici ze-TV izimbobo ezintathu ze-USB y amachweba amane e-HDMI ukuze sikwazi ukuxhuma amadivayisi ahlukahlukene; futhi ine Ukuxhumeka kwe-WiFi, 8GB wesitoreji sezinhlelo zokusebenza, Android TV njengohlelo lokusebenza lwe-Smart TV nokunye okuningi. Ah! Futhi iqinisekiswe ngamandla u-A, ngakho-ke ibhekele imvelo futhi ngeke ikunikeze ukwethuka kwisikweletu sikagesi.
Futhi sigcina ngeSouth Korea efanayo esaqala ngayo nale TV ye-Samsung UE49KS7000 nayo Isikrini se-intshi se-49 (kahle, kuncane kunalokho esikubonile kuze kube manje, kepha akuyona umbuzo wezimpi noma haha) I-Ultra HD 4K HDR LCD ngokukhanyisa komphetho okufaka amachweba amane e-HDMI namathani wokuxhuma okwengeziwe, kanye nesici I-SmartTV.
Kepha mhlawumbe okugqamile kwale TV ukuthi inikeza ifayili le- isithombe esihle nekhwalithi yomsindonoma, kufana kakhulu futhi ngisho, kwesinye isikhathi, kungcono kakhulu kunamanye amamodeli avela kwamanye ama-brand futhi nokho singakuthola ngentengo engcono.
Vele, njengoba sesibonisile ekuqaleni, lolu hlu luyisiphakamiso kuphela ngamathelevishini amahle kakhulu angama-50 ″ noma ngaphezulu esingawathola emakethe yamanje. Singasho nezinye izibonelo ezifana nePanasonic TX-50CX700, i- I-Samsung UE55JU6400 nabanye abaningi. Sithini isiphakamiso sakho? Ngabe usanda kuyivuselela ithelevishini yakho ekhaya? Ngabe usuvele uthathe isinqumo ngemodeli ethile? Sitshele ngakho futhi sizosiza abanye abafundi abafuna futhi bathathe ithelevishini yabo ehamba phambili.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Ama-TV » Ama-TV anamasentimitha angaphezu kwama-50, yikuphi okufanele akhethe?
I-International Spy Museum eseWashington DC ibanga ukuhlaselwa yinhliziyo kubavakashi bayo
IMicrosoft Andromeda, inkampani izobe isebenza encwadini yokubhalela yedijithali